'तत्काल अक्सिजनको आपूर्ति र अस्पताल बेडको व्यवस्था गर्न माग' - NepalTimes
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा, मन्त्रीहरुसँग छलफल
२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले अक्सिजनको आपूर्ति तत्काल गर्न र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
डा. महतले अक्सिजन अभावको गम्भीर समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनले आवश्यक अस्पताल बेडको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न र आवश्यकता अनुसार विदेशबाट पनि अक्सिजन र अक्सिजन सिलिण्डरको आपूर्ति गर्न पनि काँग्रेसका तर्फबाट सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
डा.महतले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। डा. महतद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ का विरामीहरु अस्पताल बेड नपाएर उपचारबाट वञ्चित भएका समाचारहरु काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरिबाट आइरहेका छन् ।
अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकाका धेरै अस्पतालहरुमा अक्सिजनको गम्भीर अभाव हुन थालेको छ । यसले गर्दा अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने कोभिड–१९ का विरामीहरुले अक्सिजन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो समस्या देशका अन्य भागहरुबाट पनि आउन थालेका छन् ।